Magamba eWTN anobva kunyika zana nemakumi maviri nesere dzinoda Kenya: World Travel Market muLondon ichaita kuti zviitike
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Wtn » Magamba eWTN anobva kunyika zana nemakumi maviri nesere dzinoda Kenya: World Travel Market muLondon ichaita kuti zviitike
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Wtn
Kune zviuru zvemagamba muindasitiri yekufambisa uye yekushanya pasi rose. Kune vashandi vekushanya vakarasikirwa nezvese nekuda kweCOVID. Kazhinji havazivikanwi. WTN gamba rehupenyu ndiye ANONOMUS Tourism Hero!
Musangano wekutanga mu-munhu weWorld Tourism Network wakarongwa paFirst Global Travel trade show kubvira denda, iro World Kufamba Musika muLondon.
Gamba rekutanga kuzivikanwa neWTN aive munhu aitungamira Kenya Tourism, Minister Najib Balala.
Uyu mukana wekusangana nevazhinji vemhare uye Nhengo dzeWTN in munhu mushure meanenge makore maviri emisangano yakakurumbira ye zoom.
World Tourism Network iri kukoka vatori vechikamu vari kuenda kuWorld Travel Market muLondon kuti vaende kuTourism Heroes Reception uye kusangana nemagamba mazhinji ezvekushanya ari kuenda kumutambo uyu wekutanga wepasi rose wekutengeserana mushure mekutanga denda.
Magamba matatu ekutanga akazivikanwa neWTN aive Hon. Najib Balala kubva kuKenya, Hon. Edmund Bartlett anobva kuKenya, naDr. Taleb Rifai vaimbove Munyori Mukuru weUNWTO kubva kuJordan. Vese vari vatatu vachange vachijoinha World Tourism Network paMagical Kenya Stand muLondon.
Kenya ichave yekutanga kugamuchira iyi yekutanga mu-munhu musangano wemagamba nenhengo dzeWTN panguva yeWTM muLondon.
Iyo Kenya Stand AF245 ichava nzvimbo neMuvhuro, Mbudzi 1, 4.00 pm
Mamwe ruzivo uripo pane heroes chiitiko webhusaitie
Iyo Horo yeInternational Tourism Magamba yakavhurwa nekusarudzwa chete kuziva avo vakaratidza hunoshamisa hutungamiriri, hunyanzvi, uye zviito. Tourism Magamba anoenda padanho rekuwedzera.
Juergen Steinmetz, sachigaro weWorld Tourism Network akati:
“Kenya ishamwari yechokwadi yekushanyirwa kwenyika. Mushure memisangano inopfuura mazana maviri ye zoom vazhinji venhengo dzeWTN vakava shamwari dzepamoyo.
Magamba edu akatipa kurudziro yekupfuura nemumatambudziko akawanda. Handisi kumirira kusangana nemamwe magamba uye nhengo dzatinonamata navo pachangu.
WTN yave nyika zana nemakumi maviri nesere uye nhengo dzinodarika chiuru dzakasimba.
YeWorld Tourism Network Kenya ichave nzvimbo yeWorld Travel Market muLondon.
Neshamwari dzedu dzese dzeKenya, Nyika Yekushanya inodada negamba redu rekutanga, Hon. Najib Balala, Secretary of Tourism kuKenya. Anozviwana zvechokwadi!